मुरली केटोको कथा ⋆ JINDAGANI.COM
Home » मुरली केटोको कथा
जेष्ठ २२, २०७८	0	By कला अनुरागी
अमिलो मन पारेर सम्झन्छन् उनी, ‘बुबाको पछि लागेर विवाहमा गएको थिएँ । नाच्ने निहुँमा जन्तीले कुल्चेको कुल्च्यै गर्न थाले । असाध्यै रोएँ । तर, घरको सम्झनाले रोयो भन्ठाने सबैले । त्यसपछि मन त कति रोयो–रोयो । त्यसले वितृष्णा जन्मायो मलाई पुर्ख्यौली पेसाप्रति । त्यसपछि कहिल्यै गइनँ बाजा बजाउन ।’
त्यसो त उनी बाजासँगै हुन्छन् अहिले पनि । तर, किबोर्डजस्ता आधुनिक बाजा । अत्याधुनिक प्रविधि पनि l ती बाजामाथि उनको औँला कम चल्छ, दिल–दिमाग बढी । त्यहीबाट पैदा गरेको धुनले दिन्छ उनको परिचय । ‘तिमीविनाको जीवन…’जस्ता गीतका संगीतकार आशिष अविरल । ‘नाइँ मलाई थाछैन’, ‘मीठो सारै मीठो’, ‘लाउनेले नजर लगायो त’, ‘माया लुकीलुकी’, ‘मेरो दुनियाँ बेग्लै छ’, ‘यो कुरा गोप्य’, ‘तिमी नै मेरो सास हौ’, ‘म बाँचेको’ जस्ता गीतका संगीतकार र संगीत संयोजक आशिष अविरल । चर्चित गीत ‘परान परान’का त गायक पनि आशिष अविरल l
बुबाले छेडेर दिन्थे कहिले बाँसुरी, कहिले मुरली । त्यही बजाउँदा–बजाउँदै संगीतमा रस पस्यो उनलाई । सबैले भन्थे– ‘राम्रो बजाउँछस् ।’ हुँदै जाँदा त ‘मुरली केटो’ पो भन्न थाले गाउँघरमा ।
कत्तिले भन्छन्– मान्छेको दुई जात । महिला र पुरुष । तर उनको प्रतिवाद छ त्यसमा, ‘होइन, त्यो त लिंग पो हो त ? कहाँ जात हो र । मान्छेको जात त मान्छे नै हो ।
‘अब किबोर्ड किन्छु र संगीततिर लाग्छु’ मनमनै अठोट लिए । ऋण गरेर दाम पनि जुटाए । सहुलियतमै किबोर्ड बेच्ने मान्छे पनि फेला पारे । तर, दुर्भाग्य ! त्यही वेला बुबाको गोडा ‘फ्याक्चर’ भयो । पैसा उपचारमै सकियो । योजनालाई डेढ वर्ष पर धकेल्यो ।
अहिलेको ट्रेन्डचाहिँ कता–कता आफूले पछ्याएको बाटोभन्दा फरक भएजस्तो लाग्छ उनलाई । ‘आवेगमा, प्रतिशोधमा गीत लेख्ने, संगीत गर्ने प्रचलन पो देख्छु म हिजोआज । के भएर हो कुन्नि सिआरबिटी/पिआरबिटीमा पनि त्यही चलेको छ ।
सिकाइको भोकले डोरेमी संगीत पाठशाला, गुरुदेव कामतदेखि नोर्बु आप्पासम्म पुर्‍यायो । जुन जारी छ अझै । काम पनि जारी नै छ ।
उनको भोगाइ छ– त्यसैले जनस्तरमा संगीत गर्नुको महत्त्व नै स्थापित भएको छैन । गाउँमा ‘तैँले के काम गर्छस्’ भनेर सोध्छन् । ‘म संगीत गर्छु’ भन्यो । ‘कहाँ ! संगीत गरेर हुन्छ, यसो पैसा आउने काम गर्नुपर्छ नि । बरु स्कुलतिर पढाउनू’ भन्छन् ।
संगीतमा लागेर उनले जानेको यत्ति हो– संगीत सागर हो । भन्छन्, ‘अहिले आएर मलाई लागेको छ, म यो क्षेत्रमा खाली नै छु । मेरो भण्डारमा केही पनि छैन । संगीतमा लाग्ने हो भने पूरै भण्डार भर्नुपर्छ ।’
उनले बुझ्दै गए– ती त पियानिस्ट रहेछन् । संगीत शिक्षक पनि रहेछन् । त्यति मात्रै हो र साउन्ड इन्जिनियर रहेछन् । पश्चिमी संगीतको उस्ताद नै रहेछन् । ज्याज, ब्लुज, रक सबैको गहिरो अध्ययन । भारतको संस्कृति पनि खर्लप्पै खाएका । शास्त्रीयमा पनि उस्ताद । जब ती संगीतकारले अझै महिनाको १२ हजार तिरेर संगीत सिक्दै छु भने त्यसपछि उनलाई ठूलो चड्कन महसुस भयो । उनलाई लाग्यो, ‘हत्तेरिका ! ती पनि संगीतकार, म पनि संगीतकार र तिघ्रा ठटाएर भाका हाल्ने पनि संगीतकार ।’ उनी निष्कर्षमा पुगे, ‘बल्ल थाहा पाएँ कि मैले त केही जानेको रहेनछु । जरा त कहाँ हो कहाँ ? पात मात्रै पो भएका रहेछौँ ।’
Tagsआशिष अविरल नेपाली सङ्गीत